Maitiro Ekuita Kushambadzira Kushandisa Kushanda Kwawe | Martech Zone
Maitiro Ekuita Kushambadzira Kushandisa Kushanda Kwauri
Chipiri, June 17, 2014 Chipiri, June 17, 2014 Douglas Karr
Pane zvakawanda zvekuvhiringidzika kumberi kwepamhepo nhasi pane izvo chaizvo zvekushambadzira michina iri. Zvinotaridza sekuti chero kambani inofungidzira yekutumira email zvichibva pachiitiko chakakonzera vanozvidaidza marketing automation. Takadzidza kubva kushambadziro yedu kushandisa michina, Right Pane Inopindirana, Kuti pane akasiyana maitiro eakashambadzira otomatiki system ayo mushambadzi wese anofanirwa kutsvaga:
Data - kugona kuunganidza dhata, kungave kuburikidza nemafomu, kana kuburikidza nekubatanidza vatengi uye dhatabhesi dhatabhesi. Izvi zvinogonesa makambani kukamuranisa zvakanaka kutaurirana kwavo pane huwandu hwevanhu, firmagraphics, nhoroondo yekutenga, uye imwe data rakakomba.
Kugovera - kungokonzeresa chiitiko hakusi kwekushandisa, asi kugona kucherechedza kudyidzana kwakawanda kwekutungamira kana mutengi uye gadzira modhi yekumaka izvo zvinofambisa mutengi pamwe neupenyu hwevatengi ndimo maunowana zvechokwadi meseji chaiyo kune unogamuchira iye panguva yakakodzera.
Donhwe uye kwakakonzera mameseji - Dzimwe nguva kumutsa email, senge iri mune yakasiyiwa yekutengera ngoro, inoshanda nemazvo. Asi dzimwe nguva iwe unofanirwa kupfuudza ruzivo rwakakosha runozivisa tarisiro yako kudzamara vagadzirira kutora danho kana kutenga. Kushambadzira kwekudonha kwakakosha, kuunza meseji kune iye anogamuchira kana vachida kana kuida.
Kubatanidzwa Kwemagariro - vatengi uye zvinotungamira zviri kutaurirana nemhando kuburikidza nesocial media, kwete pane yavo saiti kana nekumhara peji. Yako yekushambadzira otomatiki chikuva inofanirwa kukwanisa kuyera kukanganiswa kweaya ekubata mapoinzi.
Ehezve kuzivikanwa kwevashanyi, mapeji ekumhara, email uye kushambadzira nhare, iri nyore mushandisi interface zvese zvakakura maficha ekushambadzira otomatiki system. Sarudza yako yekushambadzira otomatiki chikuva zvine hungwaru. Isu tinowona sezvo makambani mazhinji anotenga chinhu chakapfuma sisitimu iyo yavasina kumboita - asi vachibhadhara. Uye isu tinoona mamwe makambani achinetseka kuti azive zvizere kudzoka kwavo kwekushambadzira otomatiki kutenga nekuti system yacho ishoma. Mazhinji ekushambadzira otomatiki mapuratifomu anogumira pakutora, uye hazvina kukwana zvinotarisana nekuchengetedzwa uye kusimudzira kwemutengi.
Kune ekushambadzira madhipatimendi ari kutsvaga kuwana yemakwikwi mukana, kushambadzira michina maturusi inopa mikana yakakura. Semuenzaniso, makambani anoisa mari mukushambadzira otomatiki software anowanzoona gumi neshanu muzana paseji pabasa ravo rekugadzira. Kunyangwe zvirinani, makambani mazhinji anotanga kuona kudzoka pane yavo yekudyara ipapo - 15 muzana vanoona ROI mukati memwedzi mitanhatu, uye 44 muzana vanoona ROI mukati megore. Kuti uite izvi zvese, zvakadaro, iwe unofanirwa kuve uine vanhu chaivo munzvimbo.
ichi kushambadzira otomatiki infographic kubva kuAdecco Inoita kuparara kukuru kwemabhenefiti uye yakanakisa maitiro ekuisa yako yekushambadzira otomatiki chikuva kuti ushandise.
Tags: adeccodata yemutengiDatademographicsdonhedza emaildonhwe kushambadziradzidzhubspotlead alamamarketing automationkurudyi pane kudyidzanascgingzvikamuyakatanga emailzvakakonzera kutumira
Zvimwe zvirimo, Mamwe Matambudziko: Kurwira kweKutengesa Rep